Rex Tillerson oo gaaray Riyaad si uu xaliyo khilaafka Khaliijka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Rex Tillerson oo gaaray Riyaad si uu xaliyo khilaafka Khaliijka
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray magaalada Riyaad ee Caasimada Dalka Sacuudiga maanta oo sabti ah, waxa ay tani qeyb ka tahay socdaal uu ku marayo bariga dhexe muddo toddobaad ah.
Rex Tillerson, ayaa la kulmaya Dalka Sacuudiga Caadil Al Jubeyr, isaga oo kadib u ambabixi doona Magaalada Dooxa si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed ee Khaliijka.
Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu dhinaca kale ka qeyb gali doono wadahadalada Sacuudiga iyo Ciraaq oo lagu hagaajinayo xiriirka labada dhinac oo mugdi ku jiray sanadihii dambe.
Waxa uu muujiyay sida uu ugu kalsoon yahay in xal laga gaaro khilaafka, marka loo eego buu yiri sida Qadar iyo Dowladaha xiriirka u jaray ay diyaar ugu yihiin wadahadal, hase ahaatee waxa uu sheegay in xalka uu waqti u baahan yahay.
Afhayeen u hadashay Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa laga soo xigtay in ay tiri “waxa uu Tillerson isku dayayaa in dhinacyada uu ku dhiiragaliyo in ay isugu yimaadaan Miiska wadahadalka blase aysan dooneyn dhinacyada in ficil loo badalay”
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa socdaalkiisa bariga dhexe sidoo kale ku tagi doonaa qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Aasiya, sida Hindiya, bakistaan iyo Switzerland.
Previous articleAl-shabaab oo gaari dad shacab ah ay saarnaayeen ku qarxiyey Sh/Dhexe, iyo qasaare dhimasho oo falkaasi ka dhashay